Man City-da Premier league & Man City-da Tartanka Champions League Way Kala Duwan Yihiin, Guardiola-na Waji Gabax Ayuu Wajahayaa. - GOOL24.NET
Man City-da Premier league & Man City-da Tartanka Champions League Way Kala Duwan Yihiin, Guardiola-na Waji Gabax Ayuu Wajahayaa.
Manchester City ayaa taariikh xun looga diwaan galiyay kulankii ay xalay guuldarada kala soo laabtay Tottenham wuxuuna noqday kulankii shanaad ee ay abid ka hor timid kooxaha England ee kulamada tartamada kooxaha Yurub waxayna waji gabax ku tahay in ay dhamaan tood shantan kulan soo wada guuldaraysatay.
Man City ayaa guuldarooyin marti iyo man ah kala kulantay Chelsea xili ciyaareedkii 1970/70 waxayna kadib guuldarooyin marti iyo minan ah kala kulantay Liverpool xili ciyaareedkii la soo dhaafay laakiin rekoodhka liita ee Man City ayaa xalay sii socday waxayna guuldaro kala soo laabtay Tottenham.
Laakiin rekoodhka uu Guardiola ku leeyahay kulamada martida ee wareegyada bug baxa Champions league ayaa ah mid aad u liita oo aan ku koobnayn waayihiisa Manchester City oo kaliya balse uu hore ugu soo dhibtooday.
Guardiola ayaa 26 kulan oo wareegyada bug baxa Champions league ah soo maamulay kooxihii uu ka soo shaqeeyay waxaana layaab leh in 10 guuldaro ay soo gaadhay isla markaana uu 10 kulan barbaro soo galay taas oo la micno ah in 26 kulan oo marti uu Champions league ku soo noqday uu 6 kulan oo kaliya soo guulaystay.
Waxaa si cad loo ogaaday in kooxda Manchester City ee tartamada maxaliga ah ee England u tartamaysa iyo kooxda Man City ee Champions league u tartamaysaa ay gabi ahaanba kala duwan yihiin waana sababta uu wali Guardiola u aamini waayay in ay Champions league ku guulaysan karaan.
Haddii ay Man City xasuuq wayn u soo gaysatay kooxaha England ee tartamadii EFL Cupka, FA Cupka iyo Premier league, waxay hadda si xun ugu soo dhibtootay kulankii lugtii hore ee Champions leauge ay kula ciyaartay Tottenham.
Inkasta oo markii hore Man City lagu darayay kooxaha ku guulaysan kara koobka UEFA Champions League, hadda waxaa soo baxaya shaki wayn oo ah haddii ay kooxda Guardiola soo dhaafi karto Tottenham iyo haddii kale.
Man City waxay haddaba ku soo guulaysatay EFL Cupka, waxay joogtaa finalka FA Cupka halka ay Liverpool si adag ugula dagaalamayso koobka Premier League laakiin waxaa Guardiola walwal wayn ku abuuraya xaaladii uu kooxdiisa City ku daawanayay xalay ee kulankii Tottenham iyo imtixaanka ay mari doonaa kulamada soo socda oo ah kuwo xili ciyaareedka City go’aamin doona.
Man City ayaa muddo sanad ah goolal soo dhalinaysay waxayna markii ugu danbaysay ee ayna gool dhalin ahayd April 4,2018 kii markaas oo ay Liverpool kaga hor yimaadeen Champions leauge laakiin markale Man City ayaan gool dhalin April 9,2019 oo ay Tottenham kaga hor yimaadeen Champions league.
Si kastaba ha ahaatee, Guardiola ayaa tartanka Champions league si xun ugu soo dhibtoonayay tan iyo markii uu Barcelona ka baxay ee uu koobkan kula soo guulaystay, waxayna u muuqataa in aanu wali helin qaacidada guusha ee UEFA Champions League ee kooxdiisa Man City.